I-MMAD (i-Demethyldolastatin 10) (203849-91-6) HPLC =98% | AASraw
/ iimveliso / IiReagents zeR & D / MMAD (iDemethyldolastatin 10)
Akukho kalo SKU: 203849-91-6. Udidi: IiReagents zeR & D
I-AASraw inokusetyenziswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-MMAD (i-Demethyldolastatin 10) (i-CAS 203849-91-6), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Ukongezelela, MMAD Kubikwa ukuba kusetyenziswe kwimveliso ye-anti-drug conjugates (NDCs). Kwii-NDC, i-MMAD idibene ne-anti-5T4 anti-anti-anti-Her2. Kuboniswa ukuba ii-NDC zibonakalisa ukusebenza kakuhle kunye ne-pharmacokinetics.
I-MMAD (Demethyldolastatin 10) ividiyo
I-MMAD (iDemethhyldolastatin 10)
igama: MMAD (Demethyldolastatin 10)
Ifomula yeMolekyuli: C41H66N6O6S
Ubunzima Ezinto: 771.06
umbala: Ukumhlophe ukuya kumhlophe (okuqinileyo)
I-MMAD (i-Demethyldolastatin 10) (i-203849-91-6) ukusetyenziswa kumjikelezo we-steroids
Iintetho: I-Demethyldolastatin 10 (203849-91-6); i-Monomethylauristatin D; i-Monomethyl Dolastatin 10
Isixwayiso kwi-MMAD (iDemethhyldolastatin 10)
Umkhiqizo awuqinisekanga ngokugcwele kwizicelo zonyango. Ukusetyenziswa kophando kuphela
Ukuze ufumane ubunqamle obuphezulu, nceda ushuthule ityhubhu kwi-37 ℃ kwaye uyigubungele kwibhanki ye-ultrasonic kwithuba elithile. Isisombululo sendawo singagcinwa ngezantsi -20 ℃ ngeenyanga eziliqela.
In Vitro: I-MMAD (iDemhyhyldolastatin 10) (i-203849-91-6) idityaniswe kwinkqubo enqinileyo ye-oxime-ligation ukuvelisa i-ADCs ezinokuthi-zi-anti-man-antibody ratio ze ~ 2.0. Iziphumo ezibonayo zibonisa iimpawu ezifanelekileyo ze-pharmacokinetic, umsebenzi osebenzayo kwi-vitro cytotoxic ngokubhekiselele kumaseli omhlaza we-HER2 +. Xa kuthelekiswa nee-ADC ezilungiselelwe i-cysteine ​​alkylation emva kokunciphisa i-disulfide yokutshatyalaliswa kwemvelo, indawo ekhethekileyo ye-AD-amino-acid-based-ADCs ayibonakalisiwe yanda kwi-vitro cytotoxicity
KuVvivi: Iziphumo zokusetyenziswa kwamachiza e-anti-drug (ADCs) zibonisa ukugqitywa kwe-tumor epheleleyo kwiirandi. Baye bafumana iphrofayili ephuculweyo yeexicology kwiigos.
Indlela yokuthenga i-MMAD; ukuthenga i-Demethyldolastatin 10 kwi-AASraw